विचार – Page 50 – Everest Dainik
मनहरि तिमिल्सिना२०७३, २८ माघ शुक्रबार
यसकारण निर्वाचन चाहन्छ माओवादी
माओवादी निर्वाचन चाहन्छ वा चाहँदैन ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपूर्व माओवादीका लागि संविधान वा सरकार कुन प्रधान ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने हुन्छ । संविधान र सरकारमध्ये कुन प्राथमिक भन्ने प्रश्न निरुपण नभएसम्म माओवादी सरकारको आयु लम्बाउन चाहन्छ वा चाहँदैन ? भन्ने प्रश्नको यथोचित निक्यौल हुँदैन ।
केशव लम्साल२०७३, २२ माघ शनिबार
सीमान्तकृत वर्गको प्रतिबिम्ब पुस्तक ‘ऐना’
हामी साहित्यलाई समाजको ऐना मान्छौं । ऐनाले जसरी कुनै वस्तुको यर्थाथ रुपलाई प्रस्तुत गर्दछ साहित्यले पनि त्यही धर्मलाई अवलम्बन गर्दछ ...
नहेन्द्र खड्का२०७३, २१ माघ शुक्रबार
संविधान संशोधन, कार्यान्वयन र प्रचण्डलाई चुनाव गराउने अवसर
निर्वाचन घोषणाको मात्रै कुरा गर्ने हरेक मानिसहरुलाई आम जनताले निर्भिकतापूर्वक सोध्नु पर्छ : के हाम्रो संविधानमा जतिसक्दो छिटो निर्वाचन गर्ने, सांसदहरुको तलब/भत्ता पटक पटक बृद्धि गर्ने, संसद विकास कोषको नाममा करोडौँ रुपैयाँ नीजि तजबीजमा खर्च गर्ने र त्यसबाट मोटो रकम असुल उपर गर्ने भनेर लेखेको छ ? के संविधानको काम यत्तिमा सिमित छ ?
भीष्म थापा२०७३, १७ माघ सोमबार
गठबन्धनबाट अात्तियो एमाले, चुनाव भाँड्न गोप्य रणनीति बनाउँदै
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सरकार र प्रधानमन्त्रीको आलोचनामा जुटेको एमाले चुनावको मुखमा आइपुग्दा सत्ता गठबन्धनको ...
टीकाराम राई२०७३, १६ माघ आईतवार
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ‘राष्ट्रवाद’को प्रयोग भनेको ‘हिटलर कूटनीति’ हो
नेपालमा उठेको भारतविरोधी ‘राष्ट्रवाद’ले चिनियाँ भक्ति र संघीयताविरोधी जनमत बढाउने खतरा छ। नेपालमा अहिले भारतको विरोधमा चर्को ‘राष्ट्रवाद’को हावा चलेको ...
शंकरमान श्रेष्ठ२०७३, १६ माघ आईतवार
शहीद बन्नुपर्ने जनता, उपलब्धिमा लडाई गर्ने नेता
हामीहरूले एकै स्वरमा भन्यौं–हामी जनता। तर उहांले मतिर फर्केर भन्नुभयो - ती चारजनासंगै गएर फोटो खिंचाउनुस् । पांचौं मूर्ख अनि तपाई बन्नुहुनेछ । सहज उत्तर सुनेर एकछिन त सबै हांस्यौं। एकले अर्कोको मुख पनि हेर्‍या-हेर्‍यैं गर्‍यौं ।
रूद्रप्रसाद भट्टराई२०७३, १४ माघ शुक्रबार
सभापतिले प्रस्ताव गर्ने पदाधिकारीलाई निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था छ । खुमबहादुर खड्कासँग ५, रामचन्द्र पौडेलसँग २८ र सभापति देउवासँग ३१ निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरू रहेका छन् । यसकारण गणितिय हिसावमा तलमाथि पर्ने सम्भावनाका कारण समितिलाई पूर्णता दिने प्रस्ताव अघि नबढेको देखिन्छ ।
गोकर्ण भट्ट२०७३, १४ माघ शुक्रबार
ओली सन्केर फर्किए, प्रचण्ड पर्खेर बसिरहे
ठीक यही समयमा उता स्याङ्जामा ओलीले भाषण गर्दा बत्ती गएपछि उनको पारो तात्यो । उनले यसलाई अनपेक्षितरुपमा लिए । आयोजकहरुले आफूलाई अपमान गरेको शैलीमा यसलाई लिए ।
मेघराज सापकोटा२०७३, १२ माघ बुधबार
खाडीमा रहेका नेपाली भन्छन्– प्रधानमन्त्रीको घोषणाले एकदमै खुशी, कार्यान्वयन राम्रो होस्
बैदेशिक रोजगारमा गएर मृत्यु भएकाहरुको बिमा रकम दोब्बर बनाएर सरकारले राम्रो काम गरेको छ । घाइते र बिमारी भएर स्वदेश फिर्दा पनि केही रकम पाइने भो जसले गर्दा बिदेशमा कमाएको रकम उपचारमै खर्च गर्नु परेन । यसलाई राजनीतिक रंग दिएर विरोध गर्नु भन्दा पहिले ती बिधवा पत्नीको पीड़ा र अनाथ, अबोध बालबालिकाको भबिस्यलाई पनि स्मरण गर्ने की ?
बसंता भण्डारी२०७३, १२ माघ बुधबार
पीके क्याम्पसमा हराएको बीपीको समाजवाद
नेविसंघको मनपरितन्त्र खुरुखुरु स्विकार गरे पिके शान्त हुन्छ। तर जब उनीहरुका गलत काम कार्वाही विरुद्ध आवाज उठायो तब पिके एकाएक अशान्त वन्छ।